आफ्नो रक्षा र चुनावी एजेण्डाको रुपमा कुलमानलाई पुनः दोहोर्‍याउने तयारी ! – Wow Sansar
आफ्नो रक्षा र चुनावी एजेण्डाको रुपमा कुलमानलाई पुनः दोहोर्‍याउने तयारी !
काठमाडौं। मुलुकलाई उज्यालो दिने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्, कुलमान घिसिङ । १८ घण्टाभन्दा बढी लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो दिएका कुलमान जति शासकको अप्रिय छन्, त्यत्ति नै जनताको प्रिय र पूज्य छन्।
तर, तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य नहुने, लोडसेडिङ हटाउन वर्षाैं लाग्ने प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखदेखि जलविद्युत विज्ञहरुको भनाइ विपरीत कुलमानले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै सदाको लागि अन्धकार हटाएको यथार्थले नेपालीको मन जित्न सफल भयो।
२०७३ भदौं ३१ गते प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका कुलमानले सोही वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनबाट लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान थालेका थिए । र २०७७ भदौ ३० गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कुलमान घर फर्किंदै गर्दा लोडसेडिङ नेपालीले बिर्सिसकेका थिए । उनको बिदाइसँगै आक्कलझुक्कल बत्ति जाँदा कतै फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका भने पैदा गराइरहेको छ । प्राधिकरणमा २६ वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाएका कुलमान नेपाली जनताको प्रिय र पूज्य पात्र हुन।
मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढिरहँदा कुलमानलाई आफूले ल्याएको, दोहो¥याउन चाहेको नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अर्थात कुलमानलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन थालिएको छ ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिँदा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए । लोडसेडिङ हटाउने क्रममा प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका शर्माले जस पाउनु स्वभाविकै हो ।
तर, पूर्ववर्ती मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि जस खोजिरहेका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन आफ्नो ठूलो हात रहेको रायमाझी दाबी गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन आफूले सबै तयारी पूरा गरेकै बेला सरकार परिवर्तन भएको रायमाझीको दाबी छ ।
पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी थिए । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै रायमाझी पनि ऊर्जा मन्त्रीबाट हटे । पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भए । जनार्दन शर्माकै पालामा कुलमान प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भए ।
यतिमात्रै होइन सरकारमा छँदा कुलमानकाबारे चुइँक्क नबोलेका पूर्व ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अहिले उनै कुलमानलाई प्राधिकरणमा दोहो¥याउन चाहेको बताउन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन यही पुस ५ गते ऊर्जामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पुनले कुलमानलाई आफूले प्राधिकरण प्रमुखमा दोहो¥याउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
स्मरणरहोस्, कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन हुँदा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको र सोही प्रक्रिया पूरा गरेर कुलमान आउनु पर्ने बताएका थिए ।
तर, अहिले आफ्नो रक्षा र चुनावी एजेण्डाको रुपमा उनै पुन कुलमानलाई आफूले प्राधिकरणमा दोहो¥याउन चाहेको बताउन थालेका छन् ।
Prevछोराछोरीले लत्याएकी यी आमा, जो उठ्न बस्न सक्दिनन् जस्ले विगत ४ वर्षदेखि रुँदै यस्ता जाडोलाई कटाएकी छन्,‘भिडियोसहित’
Nextसुन्तला राखेको झोला खोलेर हेर्दा झस्कियो प्रहरी,
भैंसीमाथि चढेर घाँस खाँदै बाख्रो, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियोसहित)